Mumiriri weBudiriro muparamende, VaCosta Machingauta
Nhengo yeMDC Alliance inomirira Budiriro muparamende, VaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare ramejasitiriti muHarare nhasi vachipoperwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Nhengo idzi dzakasungwa musi weChipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva.
Muchuchisi wenyaya iyi, Muzvare Caroline Mutimusakwa, vaudza dare kuti musi waKubvumbi 4 VaMachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi, Amai Eve Mhende, kubasa kwababa vavo kuMabvuku ndokutanga kupomera Amai Mhende mhosva yekuvabira nharembozha yavo.
Muzvare Mutimusakwa vati VaMachingauta vakabva vatyaira motokari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira.
Vaenderera mberi vachiti VaMachingauta vakazoudza vanhu vavaive navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu muimba iyi ivo ndokusara vaine mumhan’ari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotokari yavo vasina kuzvidzivirira.
Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza Amai Mhende kurara navo VaMachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti.
Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zvirokwazvo kuti Amai Mhende vakabhinywa.
Pamhosva yechipiri, VaMachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhan’ari vachitsvaga anzi mudare anonzi Juliet Vhureni uyo akange anzi nemumhan’ari ndiye akanga aba nharembozha yaVaMachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi waKubvumbi 3.
Asi Muzvare Vhureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi izvo zvinonzi zvakazoita kuti VaMachigauta vazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhan’ari.
VaMachingauta, avo vanga vakamirirwa negweta ravo VaSimudzirai Machingauta, vanzi nemutongi wedare Amai Barbra Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramejasitiriti risina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa.
Vanzi vagodzoka kudare musi waKubvumbi 23.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi weChipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo.
Nhengo idzi, idzo dzinoti Amai Vongai Tome, VaNgonidzashe Dzapfumba, VaPatrick Shumba pamwe naVaKudakwashe Butau, dzakasungwa mushure mekunge nhengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge Amai Tome vachemachema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa.
Izvi zvinonzi zvakazoita kuti mapurisa arove nhengo dzeMDC Alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance, VaMakomborero Haruzivishe, avo vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera.
Vasungwa vana ava, kubudikikdza nemagweta avo, vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava, VaGift Mtisi, vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi, VaLancelot Mutsokoti, vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa naVaMtisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Zvichakadai, mutongi wedare panyaya iyi, VaRichard Mangosi, vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava neMuvhuro.
VaMalaba Vanomanikidzwa Kuenda kuMudyandigere neDare reHigh Court